Cudurkan Magacii, Mase la Kulantay?! Waxaana hal mar kala dhuunta wixii nacamleeye ahaa.. (Qormo) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Markii si deg deg lagaga qaado xil aad Soomaaliya ka haysey, waxaad durba la kulantaa jaha wareer iyo dareen hoose oo xasillooni darro ah.
Waxaa hal mar qarsooma, jawigii is-buurashada ahaa ee agtaada kajirey. Shanqar la’aan ayaa dhinac walba kaa hareysa, waxaana hal mar kala dhuunta wixii nacamleeye iyo guulwade subax walba kugu soo asbixi jirey, kuna tasbiixsan jirey amaantaada.
Dhowrkii taleefoon ee waawaynaa oo sida loo soo garaacayo badiyaa batarigu ka dhici jirey adingoon ka jawaabin ayaa aamus ku idlaada, iyadoo shaki kaa galo mararka qaarkood iney wali shaqeynayaan iyo in kale.
Haddii aad shaqsi ahaan isku daydo bal inaad wacdo lambarada qaar kamid ah dadkii maalmo ka hor aad wada maadeyn jirteen, qosolkana isla jiibin jirteen, shaqo wadaagana aheydeen, midkoodna kuma jawaabayo, «waa yaab, war yaan wacaa taloow» ayaad hoos u tiraabtaa marar badan.
Laakiin waxaa suurogal ah in taleefan wiifto ah mar mar kaaga yimaado saaxiib hore oo intii aad jagada haysey aad wiciidiisa dhibsan jirtey, laakiin kalkan waxaad u qabatey hal haleel. Isagu wuxuu kuu soo wacey bal inuu kuu muujiyo niyad wanaag muraalkana kuu dhiso, waayo waa ruux dun fiican oo aan kaaga aar goosaneynin wixii uu dhaqan xumo, been, ballan la’aan iyo isla waynen kaala kulmey intii aad xilka ku sarqaansaneyd!!.
Mararka qaarkood ayaad xasuusata, mid abwaana oo xoogaa erayo iyo til toolmoon ah xafladaha kaaga marin jirey, ama fannan hees kaban macaan leh qaacis kugu maaweelin jirey. Inkastoo oo aad u yeerto oo aad xoogaa shaxaad yara siiso oo ay xoogaa kugu maaweeliyaan erayo ka farxiyana ay dhagahaaga maqashiiyaan, haddana maqalkaagu uma waddana sidii hore oo walaac ayaa kolba hoos kaa gujinaya oo riyo maalmeed inaad ku jirta kuu xasuusinaya!!.
Xilli dheer haddii aad bulshada ka go’neyd ayaa waxaad ku dhiirraneysa marka dambe inaad soo abbaarto hoteeladdii lagu caweyn jirey.. meel walba dad baa dhooban, laakiin ma jirto cid kugu soo xoomeysa sidii caadadu aheyd, xitaa salaan ma jirto, waa yaab. Si kasta oo aad dholatus iyo gacan haatis badan u sameyso dadku kuma arkaan, ama ugu yaraan ma doonayaan iney ku arkaan!!.
Waxaas oo dhan waxaa ka darran dhowr ruux oo xisaabo idinka dhexeeyeen oo aad qandaraasyo ku naas nuujin jirtey ayaa ambadey, mana doonayaan iney xisaabtii aad ka sugeysey ku siiyaan, kuwo kale oo aad u dhibatey lacago caddaan ah,qaar kale oo hanti ma guurta ah kuu gadey oo kuu hayey iyo kuwo kale oo aad ku raad gadan jirtey, isla markaasna aad lacagaha marsiisan jirtey ayaa iyagiina hal mar ku wada inkirey!!.
Waxaa si wis leh oo gabaabsi sii ah xoolihi dad wayne ee horey u boobtey, waxaana gujis iyo gunuunac kugu bilaabey xaasaskii badnaa ee aad kala barkan jirtey barisamaadii oo iyagu saluug ka qaadey jeeb xumidaada kaana waayey falax falaxsanaantii iyo dhaga nugeylkii dalabkoodii aan mayada lahaan jirin.
W/Q: Abdi Yusuf Farah